Qaybaha birta - Mestech Industrial Limited
Qaybaha birta waa bir bir ah, fallaadho bir ah, go'yaal bir ah, qolof bir ah, iwm. kuwaas oo ka samaysan waxyaabo bir ah.
Qalabka qaybaha birta: birta iyo biraha aan diiranayn (ama biraha aan birta ahayn). Birtu waxay leedahay astaamo aad u fiican oo maadooyinka aan birta ahayn sida balaastikada, alwaax, fiber iyo wixii la mid ah, kuwaas oo aan lagu beddeli karin wax soo saarka warshadaha
1. Qabsasho aad u fiican, oo loo isticmaalo in lagu sameeyo qaybo tabinta, sida mashiinka rotorka, korantada korantada, bareesada.
2. Dhaqdhaqaaqa kuleylka wanaagsan, waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo qeybaha kala-baxa kuleylka qalabka mashiinka, sida kuleylka kuleylka, qalabka injirta, iwm.
3. Baaxadda wanaagsan, waxay noqon kartaa cillad caag ah oo ka sameysan maaddooyinka birta, qaybaha mashiinka wax lagu farsameeyo oo qaabab kala duwan leh.
4. Alxamid wanaagsan.
5. Qalabka birtu wuxuu leeyahay astaamo farsamo sare, xoog sare iyo adkaansho.
6. Birtu waxay leedahay bar-dhalaal sare waxayna karti u yeelan kartaa deegaanka shaqada heerkulka sare.
7. Qaybaha birta waxay heli karaan saxsanaanta cabbirka iyo tayada dusha sare, oo badanaa loo isticmaalo in lagu sameeyo qaybo mashiin sax ah.
Qaybaha birta ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa qalabka farsamada, qalabka elektarooniga ah, dhismaha markabka, duulista iyo qalabka guryaha. Qaybaha birta ah ee aan u sameyno macaamiisheenna waa kuwa soo socda: Shaft, gear, cast cast, casting, sheet sheet
Dhin qaybo kabka
Qaybaha birta ahama
Qaybaha birta oo sax ah
Aluminium qaybaha dhinta
Zinc daawaha dhinta qaybo kabka
Farsamaynta farsamaynta ee qaybaha biraha Mashiinka, shaabbinta, tuurista saxda ah, metallurgy budada, wax taaj oo kale duritaanka birta, mashiinka laysarka, EDM, mashiinka ultrasonic, mashiinada elektaroolka, mashiinka dogob jajabka iyo mashiinka xawaaraha sare leh. Si la mid ah u jeesashada, shiididda, abuurista, ridaya, shiidi, mashiinada CNC, xarunta CNC CNC CNC ayaa ka shaqeynaya farsamaynta caadiga ah.
Nidaamka daaweynta dusha sare
1. Daxalka kahortaga iyo daweynta miridhku: karkarinta madow iyo buluug karkaraya ayaa sidoo kale loo yaqaan daaweynta fosfinta, sidaa darteed qaybaha biraha waxay leeyihiin caabbinta daxalka iyo u adkaysiga miridhku.
2. Daaweynta adkaynta: habka daaweynta ee lagu kordhinayo adkaanta qaybaha birta: carburization dusha sare ayaa loo qaatay si loo kordhiyo adkaanta dusha sare ee qaybaha biraha, midabka dusha sarena wuxuu isu beddeli doonaa madow ka dib marka la carboodo; daminta daaweynta waxay kordhin kartaa adkaanta;
3. daaweynta kuleylka faakiyuumku waxay hagaajin kartaa adkaanta guud.
Mestech waxay siisaa macaamiisha qaabeynta iyo ka shaqeynta qeybaha birta, aluminium ka sameysan, daawaha naxaasta ah, zinc alloy iyo qeybaha kale ee biraha. Haddii aad haysato alaab bir ah iyo qaybo aad iibsato, fadlan nala soo xiriir.